शिल्पाकी बहिनी शमितालाई प्रेमीले किन दिए धोका ? शमितालाई छोडेर दिब्यातिर लागेपछि – Hamro Nepali Samachar
Home/ मनोरंजन/शिल्पाकी बहिनी शमितालाई प्रेमीले किन दिए धोका ? शमितालाई छोडेर दिब्यातिर लागेपछि
एजेन्सी । राकेश बापट र शमिता शेट्टी बिग बोस घर मा सबैभन्दा लोकप्रिय जोडी मध्ये एक हो । यी दुईको यो निकटतालाई दर्शकले निकै मन पराएका थिए। तर अचानक प्रतियोगीहरुलाई एक अर्कावाट टाढा बनाएपछि यो जोडी पनि अलग भयो ।
दिव्याको बारेमा यी दुई बिच विवाद भएको थियो। अब शमिता शेट्टीले राकेशको स्वभाव परिवर्तन भएको बारेमा कुरा गरेकी छन् । शमिता भन्छिन् कसरी राकेश अचानक दिव्या संग मित्रता बढाए। शमिताका अनुसार राकेश पछिल्लो हप्तामा परिवर्तन भएका छन्।
एकै साथ, शो को होस्ट, करण जोहर भन्छन् कि यो राकेश बापट लाई बुझ्न धेरै गाह्रो छ। उनलाई बुझ्न दिमाग खियाउनुपर्छ । शमिताले स्विकारिन् कि राकेशले उनको मुटु तो डे का छन्। उनीहरु एक अर्कालाई मन पराउँथे। तर, पछिल्लो केहि हप्ताहरुमा राकेशको व्यवहारमा भएको परिवर्तन समिताले बुझ्न सकेकी छैनन् ।
शमिता शेट्टी र राकेश बापट पहिला निकै निकट थिए । दुबैको बिचमा गहिरो मित्रता देखियो। जुन पछि एक प्रेमको रूप मा देखियो। जे होस्, हालसालै शो को निर्माताहरु परिवारका सदस्यहरु को प्रेम समाप्त भएको छ र अब सदस्यहरुलाई एक्लै खेल्ने मौका दिईएको छ।
एकै समयमा, जोडीका रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रम सकिए पछि, राकेश शमिता भन्दा दिव्या अग्रवाल को नजिक देखीरहेकी छन्। यही कारणले गर्दा शमिता शेट्टीले राकेश बापट परिवर्तन भएको बताएकी हुन् ।
मेकर्सले भर्खरै शो को एक प्रोमो जारी गरेको छ जसमा शमिता शेट्टी राकेश बापट संग भएको विवादका कारण धेरै दुखी देखीरहेकी छिन् र नेहा भसीन संग उनको हार्दिक शब्दहरु साझा गरीरहेकी छिन्।
यस शो को बारे मा दर्शकहरु बीच धेरै क्रेज छ। लगातार मोड़ र यस मा आएका परिवर्तनले दर्शकहरु मनोरञ्जन दिन्छ । यद्यपि बिग बोसका प्रशंसकहरुको सूची धेरै लामो छ, तर त्यहाँ धेरै यस्ता सेलेब्स छन् जो यो शो धेरै मन पराउँछन्
टिभी को सबैभन्दा विवादास्पद रियालिटी शो बिग बोस को १४ संस्करण यी दिनहरुमा धेरै चर्चा मा छ। शो अब आफ्नो फाइनल तिर अघि बढेको छ। बलिउड अभिनेत्री शमिता शेट्टी, गायिका नेहा भसीन, प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल, मुस्कान जटाना र निशांत भट्ट अन्तिम हप्ताको दौडमा छन्।